RW Kheyre oo dejiyay qorshe cusub oo qalqal lagu gelinaayo shacabka Muqdisho (Akhriso) - Muqdisho Online
Home Wararka RW Kheyre oo dejiyay qorshe cusub oo qalqal lagu gelinaayo shacabka Muqdisho...
RW Kheyre oo dejiyay qorshe cusub oo qalqal lagu gelinaayo shacabka Muqdisho (Akhriso)
Ilo wareedyo ka tirsan hay’adaha ammaanka aya MOL u xaqiijiyay in dhammaan ciidamadii Booliiska aha ee la dhigay waddooyinka Magaalada Muqdisho caawa laga qaaday. Arrintan aya xogta waxaa ay noo sheegeen in xafiiska RW Kheyre uu ka wato qiyaano la rabo in looga hortago bannaanbaxyo la filaayo in ay ka dhacaan magaalada Muqdisho maalmaha soo socdo.
RW Kheyre iyo Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir Saadaq Joon aya qorsheeyay in ciidamada laga qaado waddooyinka kaddibna dhowr qarax oo is xig xiga ay dowladda Sameeyso si ay u baaqdaan bannaan baxyada shacabkana lagu indho sarcaadiyo in kooxo argagixiso ah ay ka danbeeyaan bannaanbaxyada iyo qaraxyada.
Isgoysyadii ay Ciidamada Booliska ka joogeyn Magaalada Muqdisho ayaa haawanayo kadib ku dhawaad 20 Maalin oo ay ku sugnayeen halkaas, inkastoo meelaha qaar lagu arkayo balse uu qorshaha yahay in laga qaado.
Sida ay xogta ku heshay Shabakadda Muqdisho Online, ciidamadaan oo tiradooda gaarayo illaa kun Askari ayaa waxaa loo sheegay in loo qaadayo tababar dalka Jabuuti ah si aanay u kashifmin qorshaa RW Kheyre iyo Saadaq Joon waxaana lagu xareeyey Xerada Iskuul Boolisiyo ee Magaalada Muqdisho.
Waxaa loo sheegay in seddex maalin soo socoto ayaa Ciidamadaas loo qaadi doonaan dalka Jabuuti si loo soo siiyo tababar dhanka Booliska ah maadaama aysan markii hore helin tababar ku filan iyagoo kaliya soo qaatay Tababar ku siman 3 Bil, waana Ciidamadii lagu aasaasay Taliska Booliska ee uu hoggaamiyo Saadaq Joon.
Wararkeena soo socdo ayaa idinkula wadaagi doonaa Inshaa Allah qorshaha xigo oo ay Dowladda Soomaaliya ka damacsan tahay Amniga Muqdisho.
Previous article(Deg Deg) AMISOM oo qarax lagula eegtay Muqdisho iyo rasaas xooggan oo ay ku fureen dad shacab ah
Next articleUS: Yes, we killed Islamic State’s No.2 in Somalia